Solar Camping Light, LED Solar Camping Lights, Waterproof Camp Light Muchina
Tsanangudzo:Solar Camping Light,LED Solar Camping Lights,Waterproof Camp Light,Soft Solar Camp Lights,,
Solar Camping Light,LED Solar Camping Lights,Waterproof Camp Light,Soft Solar Camp Lights,,
Zvigadzirwa zve Solar Camping Light , isu tiri vashandi vanobva kuChina, Solar Camping Light , LED Solar Camping Lights vatengesi / firisi , mabhizimisi ekugadzirwa kwezvakakura zve Waterproof Camp Light R & D nekugadzira, isu tine shanduro yakakwana yekutsvaga kutengesa uye kutsigirwa kwekambani. Tarisira mberi kubatana kwako!
China Solar Camping Light Vatengi
Solar musasa twa magetsi anoshandiswa kupa chiedza mumusasa, unozvidzinga kure mhuka, kuratidza nzvimbo kwomusasa, uye kupa inotakurika chiedza. Solar camp ing mwenje iripo: iri nyore uye ine nyore kutakura. Simba guru rekuchengetedza, hupenyu hurefu, hunobudirira chiedza chekugadzirisa sarudzo, kwete chekupisa, chiedza chine chiedza chinyoro uye pasina shroboscopic inovhenekera kwiso rinoshanda.
Kugadzirwa kwemvura, zvose-kushandiswa kwemhepo; Basa reusiku rinopenya, usiku hwekubata hove;
Kadzika, chiedza chemunda; Kugadzirisa motokari, gadziriro yekuchengetedza garaji, nezvimwewo. Izvo zvakagadzirwa zvakanaka uye zvinyorwa zvitsva, zvinowanikwa mumusha zvakare ndezvakanaka chaizvo.
Kune mhando dzakawanda dzeSair camp ing magetsi . Iye zvino isu kunyanya tinoshandisa kupisa kwechando simba rekuchengetedza chiedza tube uye bulb LED. Yokutanga ndiyo yakaoma bateri rudzi. The rechargeable musasa chiedza kugadzirwa FIZZ GLOBAL inogona mhosva chero nguva uye chero kupi zvako, kusanganisira motokari uchiraira, simba wedzerai uchiraira uye rezuva Panel kuchaja. Izvo zviri nyore kuchengetedza simba uye kuchengetedzwa kwezvakatipoteredza.